ခင်ဦးသာ| November 21, 2012 | Hits:1
| | အစိုးရက ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှု သတင်းစာဆိုပြီး ထုတ်စရာ မလိုဘူး။ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ထုတ်ဝေခွင့် ပြုလိုက်ရင် အစိုးရ သတင်းစာက ထားဖို့မလိုဘူး (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
မီးရထားနဲ့ ခရီးသွားရာဝယ် …ထမင်းရောင်းနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးလွန်းမောင်မြန်မာသတင်းစာများ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အမျိုးသားသတင်းဆု ချီးမြှင့် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> swe htwe November 22, 2012 - 1:20 am	That’s right. Go ahead. We support this issue.